Diyaarada laga leeyahay dalka Ingiriiska ee RAF F-35 ayaa ku burburtay badda Mediterranean-ka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Diyaarada laga leeyahay dalka Ingiriiska ee RAF F-35 ayaa ku burburtay badda Mediterranean-ka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Diyaarada laga leeyahay dalka Ingiriiska ee RAF F-35 ayaa ku burburtay badda Mediterranean-ka.
HMS Queen Elizabeth – markabkii calanka UK – waxa saarnaa siddeed F-35 oo UK ah, iyo sidoo kale 10 American F-35 ah. Waxa ay dhawaan ku soo laabatay Yurub ka dib markii ay in ka badan toddobo bilood ku qaadatay socdaalkeedii ugu horreeyay ee ay ku maraysay badda Koonfurta Shiinaha iyo gobolka Indo-Pacific.
Diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee UK Royal Air Force ayaa ku burburtay badda Mediterranean-ka horaantii maanta.
Duuliyaha ayaa si nabad ah loo soo badbaadiyay waxaana lagu celiyay diyaarada siday.
Horaantii bishii Nofeembar, UK waxay la wareegtay saddex dagaalyahan oo F-35 ah, oo ay ku kacday £100 milyan ($ 135 milyan) midkiiba.
British Wasaaradda Gaashaandhigga (Mod) War qoraal ah oo uu soo saaray, ayaa lagu sheegay in diyaarad dagaal oo nooceedu ahaa Royal Air Force (RAF) F-35 ay ku burburtay. Badda Mediterranean maanta. Duuliyaha diyaaradda ayaa ku guuleystay inuu si nabad ah uga saaro diyaaradda ka hor inta aysan dhicin burburka.
Duuliyaha ayaa si nabad ah loo soo badbaadiyay waxaana lagu celiyay diyaarada siday waxaana la bilaabay baaritaan ku aadan sida ay wax u dhaceen.
Sida laga soo xigtay MoD "Duuliye F-35 British ah oo ka socday HMS Queen Elizabeth ayaa la saaray intii lagu jiray hawlgallada duulimaadka caadiga ah ee Mediterranean saaka.”
"Ma habboonayn in faallo dheeraad ah laga bixiyo wakhtigan," the wasaaradda ku daray.
Burburkii maanta ee F-35 waa dhacdadii ugu horreysay ee laga soo sheego markabka calanka UK, HMS Queen Elizabeth.
Horaantii bishii November, UK waxay la wareegtay saddex dagaalyahan oo F-35 ah, oo ay ku kacday £100 milyan ($135 milyan) midkiiba, taasoo tirada guud ee maraakiibta dalka ka dhigaysa 24.
Dowladda Britain ayaa amartay lix diyaaradood oo kale, kuwaas oo lagu wado inay yimaadaan sanadka soo socda, iyo 2023 diyaaradood oo ku eg 48, iyadoo ujeedadu tahay in 35 la helo 2025 diyaaradood oo F-XNUMX ah.
Wasaaradda gaashaandhigga ayaan weli soo saarin diyaaradda, waxaana la rumeysan yahay inay ku dhacday badda 10-kii subaxnimo ee GMT Arbacadii, mana jirto diyaarad kale oo arrintan ku lug lahayd.
In kasta oo la bilaabay baaritaanka, dhammaan F-35-yada haray iyo duullimaadyada tababarka ayaa sii socda aan kala go' lahayn.